Noho ny hafanana be loatra Tandindonin-doza ny vokatra fanondrana | NewsMada
Noho ny hafanana be loatra Tandindonin-doza ny vokatra fanondrana
Tandindonin-doza ny vokatra fanondrana avy aty Afrika, anisan’izany ny avy eto Madagasikara, noho ny fiakaran’ny hafanana be loatra ato anatin’ny 25 taona ho avy. Samy ahitana fiantraikan’izany ny fahasalaman’ny mponina, ny mpiasa izany, sy ny fambolena. Hihalafo hatrany ny masonkarena hoenti-mamokatra. Vokatry ny fanadihadiana nataon’ny mpikaroka britanika izany ary izao aroso ho fantatry ny aty Afrika izao.
Hisy fiantraikany goavana eo amin’ny toekarena ny hafanana, amin’ny famokarana akora fototra avy amin’ny fambolena, hatrany amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, raha ny fanadihadiana nataon-dry zareo Britanika ao amin’ny Verisk Mapelcroft.
Sehatra fiveloman’ny olona maro anefa ny fambolena sy ny fiompiana, toy izany koa ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Koa raha miakatra hatrany ny hafanana, hihena miandalana ny vokatra. Antony iray hampihena izany ny saran’ny herinaratra ho lafo. Hihena ny rano famokarana herinaratra, mahatonga ny ao amin’ny INSTN eto Madagasikara mandrisika ho amin’ny famokarana herinaratra avy amin’ny angovo nokleary.
Voadona amin’izany hafanana izany na ireo firenena mpamokatra solika aza ka tokony hisy fepetra horaisina hiatrehana izany, raha ny fanadihadiana nataon-dry zareo Britanika. Mety mbola ho tonga ny fotoana tsy hiasana afa-tsy amin’ny andro alina …